I-UTC, i-GMT, kunye nexesha lesiZulu elichazwe
Ukuqonda ixesha le-Zulu kunye nexesha eliManyeneyo
Iingcali zenzululwazi kwihlabathi jikelele Sebenzisa ixesha elifanayo Iwashi
Xa ufunda ukubikezela kwemozulu kunye neemephu , unokwazi ukubona inamba eneenombolo ezine ezilandelwa yileta "Z" kwindawo ethile phantsi okanye phezulu. Le khowudi ye-alfabhethi ibizwa ngokuba yiX, i-UTC, okanye i-GMT. Yonke into emithathu imilinganiselo yexesha kwimeko yemozulu kwaye igcina i- meteorologists-ngaphandle kwelanga apho baxela khona-basebenzisa iwashi elifanayo leeyure ezingama-24, elinceda ukuphepha ukudideka xa kulandelwa imicimbi yezulu phakathi kwexesha.
Nangona le migama emithathu isetyenzisiswa ngokungafaniyo, kukho intlukwano encinci intsingiselo.
GMT Ixesha: Inkcazo
Ixesha le-Greenwich elisisigxina (GMT) lixesha lokuvala i-Prime Meridian (0º longitude) e-Greenwich, eNgilani. Apha, igama elithi "lithetha" lithetha "umyinge." Ibhekisela kwinto yokuba i-GMT ye-midi ngumzuzu ngokuqhelekileyo unyaka ngamnye xa ilanga liphezulu kwindawo yalo ephezulu kwi-Greenwich meridian. (Ngenxa yejubane elingalinganiyo lomhlaba kwi-elliptical orbit kwaye i-axial inclination, i-GMT ye-GMT ayisoloko ilanga liwela i-Greenwich meridian.)
Imbali yeThuthi. Ukusetyenziswa kweT GMT kuye kwaqala ngekhulu le-19 leminyaka yeBritani xa abantu baseBrithani beza kusebenzisa ixesha kwi-Meridian yaseGreenwich kunye nexesha elikulo mkhumbi ukuze baqaphele ubude bemikhosi. Ngenxa yokuba i-UK yayiyinxalenye ephakamileyo yolwandle ngelo xesha, abanye abahamba ngomkhombe bamkela umgangatho kwaye ekugqibeleni bayasasazeka emhlabeni jikelele njengendibano eqhelekileyo yendibano ezizimeleyo kwindawo.
Ingxaki ngeThuthi. Ngeenjongo zeenkwenkwezi, i-GMT yatsho ukuba iqale emini kwaye isebenze kude kube mini ngosuku olulandelayo. Oku kwenza kube lula kubafundi beenkwenkwezi kuba banokungena kwi-data yabo yokuqwalasela (kuthathwe ubusuku bonke) phantsi komhla wekhalenda. Kodwa kubo bonke abantu, usuku lwe-GMT luqale phakathi kobusuku.
Xa wonke umntu eshintshela kwindibano ephakathi kwamabini e-1920s no-1930, le mizuzu yesikhokelo esisezantsi yanikezwa igama elitsha leNkqantosi ye- Universal ukuphepha naluphi na ukudideka.
Ukususela kulolu tshintsho, i-GMT ayigqithiselwa kakhulu i-GMT, ngaphandle kwalabo bahlala e-UK kunye namazwe ayo ase-Commonwealth apho asetyenziswa ukuchaza ixesha lendawo phakathi neenyanga zasebusika. (Kufana ne- Standard Time apha e-United States.)
Ixesha le-UTC: Inkcazo
Ixesha eliManyeneyo eliManyeneyo liyi-modern version yeGreenwich Time Time. Njengoko kuchaziwe ngasentla, ibinzana, elibhekiselele kwiThuthi njengoko libalwa ukusuka phakathi kobusuku, laqulunqwa ngawo-1930. Ngaphandle kwalokhu, enye yeyona ntlukwano enkulu phakathi kweThuthi ne-UTC yiyo ye-UTC ayigcinanga ixesha lokuSindisa iSuku.
Ubhaliso obusemva. Khawuze uzibuze ukuba kutheni i-acronym ye-Universal Coordinated Time i- CUT ? Ngokwenene, i-UTC yintlukwano phakathi kweNgesi (i-Universal Coordinated Time) kunye nemigama yesiFrentshi (i-Universal Universel Coordonné). ukusetyenziswa kwesigqibo esifanayo kwisigqeba kuzo zonke iilwimi.
Elinye igama le-UTC Isikhathi sithi "Zulu" okanye "Isikhathi S".
Isikhathi seZulu: Inkcazo
IsiZulu, okanye i-Z Isikhathi se-UTC Isikhathi, kuphela ngegama elihlukile.
Ukuqonda apho i "z" ivela khona, qwa lasela iindawo zehlabathi.
YONKE ibonakaliswe njengenombolo ethile yeeyure "ngaphambi kwe-UTC" okanye "emva kwe-UTC"? (Ngokomzekelo, i-UTC -5 yi-Time Standard Standard.) Ileta "z" ibhekisela kummandla wexesha laseGreenwich, eyona yure (ii-UTC + 0). Ekubeni i-alfabethi ye-NATO yefowuni ( "Alpha" ye-A, "Bravo" yeB, "uCharlie" yeC ... ) igama liyiZulu, siyibiza ngokuba "Isikhathi seZulu."
Iingcebiso kunye neNkcazo zeScuba Divers
I-Alpha Centauri: Isango kwiiNkwenkwezi
Kuthetha ntoni uBuddha Dharma?
Amaqela aMaNtlanzi a-3 aSeko
Ngaba Ndifanele ndizuze iSiqinisekiso soShishino lwaMazwe ngamazwe?
Izinto ezimangalisa malunga neekhaya zasemakhaya
Xa i-Homeschooling Isingunaphakade
Iintlobo zethu ezi-5 ezizithandayo zeFictional Fantasy Worlds
Iincwadi ezili-15 zeMigangatho emihle kunye neeNcwadi zePap-Up malunga ne-Architecture
Imibuzo ye-Taxonomy yaseBloom
Iiklabhu zeGalofu FAQ
I-Coker College Admissions
Izinto Omele Uyenze Ukuze Uzuze I-Degree yakho yeKholeji